Lasibatry ny Governemanta Sodaney ny Mpikatroka, Tampenam-Bava ny Fampahalalam-baovao Mitatitra Tsy Fankatoavam-Bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2016 5:26 GMT
Nanomboka tamin'ny 27 Novambra ny hetsika tsy fankatoavam-bahoaka rehefa nesorin’ ny governemanta ny fanampiana ara-bola amin'ny herinaratra, ny akoran'afo ary ny fanafody. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, nitarika fihetsiketsehana ny mpianatra sy ny mpiasa ary na ny dokotera sy ny mpiasan'ny farmasia aza dia nitokona koa, mitaky fitsaboana maimaim-poana any amin'ny tobim-pitsaboana sy ny vonjy taitra. Nitolona fatratra ny toekarem-pirenena hatramin'ny taona 2011, raha nanambara ny fahaleovantenany tamin'ny Jolay 2011 ny faritra atsimo (Sodana Atsimo), manan-karena akoran'afo.
Ho valibontana amin'ny nolazain”ny manampahefana iray fa “antso nifanaovana tao amin'ny Whatsapp” ho fanetevan-daharana ny fitokonana, dia nanampim-bava ny fampitam-baovao antserasera sy ny fampitam-baovao mahazatra ny polisy Sodaney.
Ankoatra izany, tamin'ny andro voalohany nanaovana fitokonana, nahazo baiko fanakatonana avy amin'ny Fahefana Foibe misahana ny Radio sy Fahitalavitra ny fahitalavitra tsy miankina Omdurman noho ny filazana fa tsy manana fahazoan-dalana handefa fandaharana izy, na dia teo aza ny zava-misy fa efa niasa nandritra ny enin-taona ny fahitalavitra. Mihevitra ireo mpanao gazetin'ny fahitalavitra fa ny fitantaran'izy ireo ny fahatapahan'ny fanampiana no tena anton'ity didy ity, araka ny filazan'ny Sudan Tribune.
Ankoatra ny fikendrena ny haino aman-jery mahazatra, lasibatry ny media sosialy, izay ivon'ny fitarihana ny tsy fankatoavam-bahoaka sy fandraketana ny voka-dratsiny ihany koa ny governemanta Sodaney. Maro ireo mpiserasera voasambotra noho ny fanehoan'izy ireo ny fanohanany ny hetsika sy namoaka sary mampiseho arabe foana sy fivarotana mihidy vokatry ny fitokonana faobe.
Tamin'ny 26 Novambra, nosamborin'ny manamboninahitry ny fiarovana tao an-tranony i Ahmad Al-dhay Bichara mpaneho hevitra ara-panatanjahan-tena. Feo mpitsikera ny governemanta Sodaney ao amin'ny aterineto i Bichara. Tamin'ny andron'ny fisamborana, nandefa lahatsary mivantana tao amin'ny Facebook izy, milaza ny fanohanany ny tsy fankatoavam-bahoaka, ary miantso ny olona hanatevin-daharana ny fitokonana. Tao anatin'ny lahatsary, namariparitra ny Filoha Sodaney Omar Al-Bashir ho “tapa-tenda manana tantara mihoso-drà” izy.
Nitatitra ihany koa ireo mpikatroka Sodaney fa vehivavy iray antsoina hoe Om Kabas al-Ameen no nosamborina rehefa avy nandrakitra hafatra am-peo nozaraina tao amin'ny WhatsApp, mitaraina noho ny krizy ara-toekarena sy ny fiakaram-bidim-piainana kanefa ilaozan'i “Al-Bashir matory ao an-tranony.”
Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana nanao fanamiana sivily i Mahmood Sadek, mpikatroka, raha teo am-pandefasana mivantana ny araben'ny renivohitra Khartoum tamin'ny Andro Voalohany nanaovana ny tsy fankatoavam-bahoaka tao amin'ny Facebook .
Na dia nifarana tamin'ny 29 Novambra aza ny tsy fankatoavam-bahoaka, mbola mitohy ao Sodàna ny hetsi-panoherana sy ny fitokonana. Tamin'ny 30 Novambra, nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny Fitsarana Tampony ny mpisolovava ho hanoherana ny hetsika fisamborana ataon'ny governemanta, raha nitokona kosa ny mpanao gazety hanoherana ny sivana amin'ny asa fanaovan-gazety. Nisy koa ny antso tsy fankatoavam-bahoaka tamin'ny 8 Desambra.
Tamin'ny taona 2013, namono olona 200 fara fahakeliny ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny fanapahana ny fanampiana amin'ny akoran'afo. Tamin'izany taona izany, lasa lavitra ny governemanta tamin'ny fanakatonana ny fifandraisana amin'ny aterineto ho fanakanana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hanao ny fikarakarana amin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy. Ny fotoana no hanambara raha ho tafavoaka amin'ny tetikady mitovy amin'izany ny manam-pahefana amin'ity indray mitoraka ity.